Mon, Dec 09, 2019 | 17:22:28 NST
डिग्रीपास गर्ने खाडीतिर लागे
डिग्रीपास गर्ने खाडीतिर लागे, गुणात्मक शिक्षा खोई भन है झम्के गुलेली अरु है आउँदा जे सुकैभन, सेतो हात्ति आउँदा चोई भन है झम्के गुलेली
जम्काभेट: ऋषीमुनी र किशोरी
लाज, संकोच, डर केही नभएपछि उनी धमाधम लुगा खोल्न थालिन् । साडी फुकालेर एकातिर राखिन् । ब्लाउजको पछिल्तर तुनाको गाँठो र खिप पनि खोलिन् । पेटिकोटको गाँठो फुकाएर छातीभन्दा अलि माथि बाँधिन् । आमा दिदीहरुले पँधेरोमा नुहाउने बेला यस्तै गर्थे ।
मोतिरामको गजल भक्तराजको स्वरमा, यतिसम्म प्रीति गरी गरी न यता भएँ न उता भएँ
यति सम्म प्रीति गरी गरी न यता भयें न उता भयें, नत मन लियें नत दीदियें न यता भयें न उता भयें।
मोतिराम भट्ट : जसले भानुभक्तलाई चर्चित बनाए
मोतिराम भट्टले भानुभक्तको जीवनवगाथाको धेरै नै प्रशंसा गरेका छन् । उनले ‘भानुभक्तको जीवन चरित्र’ मा भानुभक्तका कविताका हरफहरु राख्दै समालोचकीय टिप्पणी मात्रै गरेका छैनन्, भानुभक्तको जीवन चर्चा पनि गरेका छन् ।
काठमाडाैं, भदाै ४ – सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई मङ्गलबार सम्मान गर्ने भएको छ ।
साहित्यकार र स्तम्भकार सम्मानित
बागलुङबाट प्रकाशित ‘ढोरपाटन’ दैनिक पत्रिकाले आफ्नो १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा साहित्यकार र स्तम्भकारलाई सम्मान गरेको छ ।
यसपालीको पलेँटीमा संगीतकार आभास र गायिका मीना निरौलाको प्रस्तुति
यस पल्टको पलोटी श्रृंखलामा संगीतकार आभास र गायिका मीना निरौलाको प्रस्तुति रहनेछ ।
धैरै समयको विश्राम पछि अचम्म, वर्षाको आगमन
हेमप्रभासको उपन्यास ‘उल्झन’ सार्वजनिक, महानायक राजेश हमालले गरे विमाेचन
काठमाडौं, साउन २९ – कवि हेमप्रभासको उपन्यास ‘उल्झन‘ शनिबार राजधानीमा सार्वजनिक भएको छ । नेपाली सिने क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको प्रमुख आतिथ्यमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, डा. नवराज लम्साल, कवि एवम् समालोचक महेश पौड्यालले संयुक्त रुपमा पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभयो ।
मलाई भात पकाइरहेको फोटो राख्न मन लागेन । भान्साको फोटो राख्न मन लागेन । त्यस्तै पारिवारिक फोटो मन राख्न मन लागेन ।
आँगनमा ईश्वर अर्पिरहेछ आफ्नो समय
हामी हाँसिरहन सकौं भनेर हाम्रा सन्तति हाँसुन् भनेर हाम्रा लागि आँगनमा ईश्वर अर्पिरहेछ आफ्नो समय ।।
प्रदूषण देख्छु खाल्डाखुल्डी देख्छु, ब्रुमर चाहिँ देखिन्न हौ झम्के गुलेली
कलाकारजति कमलादी लागे(२) व्यंग्यवाणले हात्रनी हौ झम्के गुलेली(२ बुझेर पनि बुझपचाउने जति (२) थाले तोङ्वा तात्रनी हौ झम्के गुलेली(२)
आजकल देशमा एउटा भनाइले सनसनी मच्याइरहेकोछ ‘सडकमा हिँडिरहेका अपरिचित मानिसको भिडमा पाँचवटा पत्थर मारियो भने एउटाले मात्र सामान्य मान्छेको टाउकोमा लाग्छ र बाँकी चारवटाले चाहिँ गजलकारको टाउकामा ।’
खेम ओझा स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना, चारवटा पुरस्कार घोषणा
काठमाडौँ, साउन २१ - शनिबार काठामाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘खेम ओझा स्मृति प्रतिष्ठान’ स्थापनाको घोषणा गरिएको छ ।
आफ्नै चेलो उदित प्रतियोगितामा उत्रिएपछि संगीतकार रसाइलीलाई अप्ठेरो परेछ । त्यसैले उहाँले कार्यक्रमका उदघोषक पुरुषोत्तम सापकोटालाई भन्नुभयो, ‘यो गीतको शब्द र संगीत प्रतियोगितामा छ, स्वर छैन भनेर घोषणा गरिदिनु ।’ प्रतियोगितामा उदितले गाएको गीत दोस्रो भयो ।
​‘ह्यारी पोटर’ लेखिकाले मागिन् माफी
साउन १७ – ‘ह्यारी पोटर’ लेखिका जेके रोलिङले केही दिन अघि गरेको ट्वीटको आलोचना भएपछि माफी माग्नुभएको छ ।
हरीयो पासपोर्ट बोकेर- सपना साट्न मुग्लान पसेको पनि अब त दस वर्ष पुगिसकेछ
‘समयको सारङ्गी’ विमोचित
काठमाडौं, साउन १४ – कवि भवानी पौडेलको कविता संग्रह ‘ समयको सारङ्गी’ शनिबार काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ ।
​२५ सय वर्ष पुरानो नाटकमाथि छलफल
काठमाडौं, साउन १४ – झण्डै २५ सय वर्षअघि युनानी लेखक सोफोक्लिजले लेखेको दुखान्त नाटक ‘एन्टिगोनी’का बारेमा नेपाली रंगकर्मीहरुले छलफल गरेका छन् ।
काठमाडौं, साउन १४ – सञ्चारकर्मी तथा मोडेलको परिचय बनाएका जीवन खड्का अब उपन्यासबार बनेका छन् । उनको पहिलो उपन्यास ‘ओझेल’ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच सार्वजनिक भएको हो ।
गोकर्णको जंगलमा दक्षिण एशियाका कलासाधक
काठमाडौं, साउन १३ – चराको चिरबिर तथा जंगलको शीतल छहारीमा बजिरहेको सुमधुर परम्परागत गीत–संगीतमा मन्त्रमुग्ध भएर दक्षिण एशियाली मुलुकका कलासाधक चित्र बनाउन व्यस्त छन् । *
‘पोयट्री पटरी’मा जुटे रंगकर्मीहरु
काठमाडौं, साउन १० – अभिनेता, निर्देशक वा लेखक भएर रङ्गमञ्चमा व्यस्त भइरहने रङ्गकर्मीहरु सोमबार भने फरक रुपमा प्रस्तुत भए । उनीहरु कविता बोकेर फरक मञ्चमा उभिए ।
पूजाकोठाका देउतालाई खुशी पार्न छोरीहरुलाई कहिलेसम्म मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने ?
नवराज पनेरु/उज्यालो । कैलाली, साउन ८ – सुदूरपश्चिमको सुन्दर भूगोल, जीवनशैली, सँस्कृति होस् वा सम्पदा नेपाली साहित्यको मुलधारमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन । नेपाली साहित्यका लागि सुदुरपश्चिम अझै पनि भर्जिन क्षेत्रका रुपमा हेरिएको छ ।
पञ्चायतकालमा काठका विभिन्न सामान बनाएर जीवन धान्न सफल काष्ठकलाका धनी हुनुहन्छ जुम्लाका कालो तिरुवा । तर अहिले भने उहाँलाई आफ्नो पेशा नै लोप हुने हो कि भन्ने डरले घेरेको छ ।
पद्मश्री पुरस्कारका लागि पाँच पुस्तकको मनोनयन, कुन कुन परे ?
काठमाडौं, साउन ६ – यस वर्षको पद्मश्री साहित्य पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट पाँच पुस्टकको मनोनयन शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । पुरस्कार प्रदान गर्ने खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले उत्कृष्ट पाँच पुस्तकको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो ।
‘चोट के हो, व्यथा के हो, म जस्तो घाइतेलाई सोध मिलन के हो, खुसी के हो, मसँग कहिल्यै सोध्दै नसोध .......
इतिहासलाई नबुझ्दा हामी गलत बाटोमा हिँडेका छौँ । हाम्रोमा अनुसन्धान नै नगरी, अरुले भनेको र सुनेको आधारमा इतिहासका पुस्तक लेखिने गरेको छ ।
काठमाडौं, असार ३१ – ‘नेपालका विश्वविद्यालयमा नाटक पढाउने प्राध्यापकहरु एउटै नाटक नहेरी रिटायर्ड भएका छन् ।’ अभि सुवेदीले यसो भन्दै गर्दा हलमा उपस्थितहरुमा हाँसोको फोहोरा उठेको थियो । तर यो नेपाली नाट्य क्षेत्रमा एउटा गम्भीर समस्याको रुपमा देखिन्छ ।
काठमाडौं, असार ३१ – वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु विदेशमा विभिन्न समस्या भोग्नबाध्य छन् । कतिलाई ज्यान मारेको झुटा मुद्धा लगाएर विदेशका जेलमा राखिएको छ । त्यस्तै समस्यालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ हरिमाया भेटवालले उपन्यास ‘कल्ली’ मार्फत ।
युएई, असार ३१ – युएईमा दुई महिनामा एक पटक हुने जमघट । सातैवटा राज्यमा पालैपालो उनीहरु भेला हुन्छन र आफुले रचेका शब्दहरु वाचन गर्छन । यो चौतारीलाई उनीहरुले ‘अक्षरहरुको आवाज सृजना वाचन डबली तथा श्रष्टा भेटघाट’ भनेर नामाकरण गरेका छन ।
नबोदित कृति अवार्ड बिनोदको ओलालाई, भानुु र प्रेमलाई सर्जक सम्मान
असार ३१- हरेक दुुई दुुई बर्षमा प्रदान गरिने नबोदित कृति अवार्ड यस वर्ष बिनोद खड्काको नियात्रा संग्रह ओलाले पाएको छ । कतारको दोहामा भएको कार्यक्रममा यस ६ वटा प्रतिस्पर्धी पुुस्तकलाई पछि पार्दै ओलाले अवार्ड पाएको हो ।
​‘अर्काे जुनीमा, तिम्रो चियाको कप, भएर जन्मूँ’
शंकर लामिछानेले जापानमा प्रख्यात रहेको हाइकुलाई नेपालमा भित्र्याउनुभएको हो । लामिछानेले विक्रम संवत २०१९ सालमा प्रयोगवादी कवितामार्फत भित्र्याएको हाइकुलाई पछि अभि सुवेदी, माधवलाल कर्माचार्य, मोहनहिमांशुु थापाले निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
सांगीतिक माहोलमा भानुभक्त
काठमाडौं, असार ३० – भर जन्म घाँस तिर मन दिई धन कमायो नाम केही रहोस पछि भनेर कुवा खनायो । घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धी कस्तो म भानुभक्त धनी भइकन पनि आज यस्तो ।।
खल्लो भयो दार्जीलिङमा भानु जयन्ती
काठमाडौं, असार २९ – नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अनि गोर्खाल्याण्ड कोअर्डिनेसन कमिटीको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार कालेबुङ त्रिकोण पार्कमा अवस्थित भानुभक्तको सालिकमा माल्यार्पण गरि २०४औं भानुजयन्ती मनाइयो ।
भानुभक्तको योगदान अतुलनीय :प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, असार २९ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्नाका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘उहाँ छउन्जेल डिट्ठाविचारीसित बिन्ती बिसाउँदैमा बित्यो, कहिले उडुस–उपियाँको नाचगान हेरेर झ्यालखाना रुङ्दैमा बित्यो, कविता लेख्ने कत्रो धोको हुँदाहुँदै पनि मन फुकाएर मनग्ये ठेली लेख्नै पाइएन’ स्वर्ग पुगेकै दिन आदिकवि भानुभक्तले नन्दनवनस्थित उर्वशी-पार्कमा टुसुक्क बसेर अपशोचको एक सुस्केरा हाले ।